xukunka ama naxariis doonaysaa? | Apg29
Waa nimco lagu badbaadinayo caddaalad la arag.
Iyo kuwa kuwa ugu dooneysa inay wacdiya oo ku saabsan Ilaah ku xukumayn? Waa hagaag, waxaa iyaga qudhooduba waa kuwa mar lahaa nimco badan oo kaga badbaadeen Ciise. Grace haatan u muuqataa ma khuseeyo kuwa kale, keliya.
Waxaa jira Masiixiyiinta ah kuwaas oo iyaga rabto. Maxaa reading Kitaabka Quduuska ah ma aha adag tahay in la arko. Waxay leeyihiin akhriyo oo aan sharciga ay nimcadu. xukun ah in ay raadiyaan qaybaha kala qaadi maayo, ay yihiin sida Jonah oo wuxuu ku fadhiistay geed rotem iyo sulk hoos. Waxa la yaab leh, laakiin waxaa jira dad badan Jonah Nasaarada maanta. Gaar ahaan hadda in qof samayn kartaa aragtidooda loo yaqaan Internet-ka.
Sidaa darteed, Ciise wuxuu u yimid
Ciise wuxuu u yimid in aan u diro, oo dadka u taliya. Wuxuu u yimid inuu badbaadsho iyo badbaadin. Maxaa ka dhigay si adag si ay u fahmaan? Iyo kuwa kuwa ugu dooneysa inay wacdiya oo ku saabsan Ilaah ku xukumayn? Waa hagaag, waxaa iyaga qudhooduba waa kuwa mar lahaa nimco badan oo kaga badbaadeen Ciise. Grace haatan u muuqataa ma khuseeyo kuwa kale, keliya. Waxay si toos ah u gudbay sharciga marka naftooda ay heleen naxariis. Naftooda, ay ma dhawri karaan sharciga ah, laakiin waxaa hadda waydiinaya dadka kale si aad uga ilaaliso. Sidee baa waxyaalahaas sidaas khaldan u tegi karaa?
Ciise wuxuu u yimid ma inuu xukumo dunida, ayuu u yimid inuu badbaadsho, oo u badbaadin. Tani uusan waxba iska badalin in 2,000 oo sano. Ciise waa maanta la mid ah. Badan yimaado nimcada Ciise. Weli waxaa la gaaray waqtigii tagay si ay u aqbalaan Ciise iyo badbaadi. Year nimcada bilaabay naadiyey markii Ciise uu ahaa sax ah. Grace waa wax aad u hesho lacag la'aan isagoo aan u qalanay. muddo nimcada Ilaah ee maanta khusaysaa. Waxa uu uusan waxba iska badalin.
Waxaa jira buug classic loo yaqaan "qiyaame ee Sweden". Buuggan waxaa qoray Birger Claesson helay riyooyinka ee 1950 hore in uu yahay oo ku saabsan Sweden waxaa weeraray gobolka magacaabin. Dhowr magaalooyinka Swedish duminayaa dhulka ku. Sababtoo ah Birger Cleason fariin nebiyada ahaa mid ka mid ah in nooleynta kiniisadda kiniisadaha xor ah oo badan goorna Ilaah.
content buug ee, aan ka tago qaban, laakiin marka la eego horyaalka, waxaan doonayaa in aan comment kooban. "Qiyaame ee Sweden", waa run ahaantii Kitaabka Qudduuska ah? Si aad ka jawaabto su'aashan waxaan ka akhrisan baahan kaliya John 3:17. Waxa uu leeyahay si cad in Ilaah Ciise dirin inuu xukumo dunida, laakiin u badbaadin. Si aad uga dhigto ka sii cad: Ilaah Ciise dirin inuu xukumo Sweden laakiin u badbaadin.
Oo ay aad u badan shakhsiga ah: Ilaah uma diri Ciise inaan idin xukumo, laakiin si uu idiin badbaadiyo! Qaar ka mid ah kuwaas oo maanta soo qori oo ku saabsan dembiga dadka ayaa sheegay in Ilaah u xukumi doonaa nolosha adduun, laakiin Ciise uma aan iman inaan xukumi dembilayaasha, balse si loo badbaadiyo.
Waxaan lahaa wax sii sheegidda "qiyaame ee Sweden" la daabacay on site blog aan. Laakiin markii aan on blog goobta dhisay in muddo ah ka dibna waxaan u faaruqiyo on kumanyaalka reer articles jir ah inuu ku soo bilowdo ka eber. iyaga ka mid ahaa "qiyaame ee Sweden" oo leh.
Just maalinta kale waxaan ka helay e-mail cadhooday qof. e-mail Full lagu qoray MAGAALO FAR, taas oo ka dhigaysa adag tahay inuu wax akhriyo. printer Mail warsan sababta aan u soo saaro wax sii sheegidda oo sheegay in haddii aan ma ka dib, aniga ma ahi a "dhab ah Christian".
Waxaan si degdeg ah u maleeyay in aanay articles Badbaadiyeheenna Ciise la'aan! wixii ii ah "dhab ah Christian" dhigaysa waa haddii aan Ciise iyo ma haddii aan la articles qaar leeyihiin.
Markaas waa in email printer qaaday si fiican u ogaato sababta item ahaa jiheysteen. Sidaa darteed waxaa uu ahaa ma on article laftiisa, laakiin on blog bilaabi. Ka hor inta mail u yimaadeen waxaa aan ka fiirsanayay dib-u-daabici this article, laakiin hadda aan ka fekerayo daynin waxa ay noqon.
Mararka qaarkood gariir dunida maanta dagaallo iyo masiibooyin. Laakiin tani waa wax uu Ilaah ugu soo diraa. Wars iyo masiibooyinka dhacaya laakiin waxaa jira xukun ma Ilaah ka yimid. Laakiin mid ka mid ah in Ilaah illeen dunida u soo diray, Ciise waa in uu badbaadiyo qof kasta oo isaga rumaystaa. Waxaa jira farqi wayn in Ciise ama xukummadaada.
Wars iyo musiibooyinka
Waxaan mar miinshaar news on TV oo ku saabsan nin qayliyeen mid quusasho badan oo Ilaah ku eedeeyay markii wiilkiisa dhintay uu gacmihiisa, kuwaas oo ku dhintay musiibada:
"Ilaahayow, maxaad aad wiilkayga iga qaaday?!"
Laakiin waxaan degdeg ah u maleeyay in ay ahayd Ilaah oo wuxuu dilay wiilkiisii.
Labo maalmood ka hor Christmas Eve dhintay 2008 aniga iyo xaaskeyga Marie iyo ina yar Joel gacmaheyga. Later yimid e-mail ii kuwaas oo la yaabay sababta Ciise dilay Marie iyo Joel. Dabcan, waxaan uma uu jawaabin mail ah. Laakiin haddii aanan lahaa Ciise, oo markaas aadi lahaa caawimo iyo taageero? Ciise badbaadiyey Marie oo iyana waxay ahayd amaan ah gacmihiisa, wax dhib ah maleh waxa dhacay. Waxay ahayd waqti kasta diyaar inay burburto, maxaa yeelay, iyadu lahaa wax walba diyaar ula Ilaah xagga Ciise Masiix. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in aan qabto Ciise iyo aadna ku badbaaddeen. Waxaan leenahay ma damaanado berri.
Ciise ayaa u yimid inuu naga badbaadiyo, ma xaakinka.
Tani waa article saddexaad oo aan qori ku saabsan mawduuca. Labada la soo dhaafay loo magacaabay " Ilaah waxa uu rabaa cadaadis lahayn " iyo " Maxaa mustaqbalka ha idin siiyo carruurtaada? " Waxaa jira dareen inay kaa luntay iyo wareer, waayo qaar ka mid ah marka ay timaado nimco iyo sharciga. Waxaan u baahan tahay inaad ka sii cadeeyo wacdiya in injiilkii nimcadii xagga Ciise Masiix. Waa nimco lagu badbaadinayo caddaalad la arag.